भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेपालकै पहिलो सरकारी कम्प्युटर अपरेटरमात्र होइनन्, भारतीय थिंक ट्यांकसँग निकट रहेर काम गरेका व्यक्तिसमेत हुन् । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण क्रममा उनले दिने स्पिचको कार्यक्रम संयोजनसमेत गरेका थिए । उनी भारतीय पक्षका केही थिंक ट्यांकले रुचाएका व्यक्ति हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १९ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको मुटुमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । मंगलबार राति साढे १२ बजे र बिहान ४ बजे दुई पटक उनको ९ वटासम्म एक्टोपिक बिट्स (मुटुको धड्कनमा गड्बढी) देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ ।
नदी नियन्त्रण अध्ययनमा चिनियाँ टोली
दमक झापाका ९ वटा नदीमा स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन थालेको छ । वर्षातमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने ९ वटा नदी रोकथामको दीर्घकालीन योजनाका लागि चिनियाँ र नेपाली प्राविधिक टोलीले बुधबारदेखि अध्ययन थालेका हुन् ।
बढ्ने भए पाटे बाघ !
विश्वमै दुर्लभ मानिने पाटे बाघको संख्या सन् २०१३–१४ को भन्दा बढ्ने देखिएको छ । सन् २०१३–१४ को गणनाअनुसार पर्सादेखि शुक्लाफाँटासम्मका निकुञ्जमा १ सय ९८ वयस्क बाघ थिए ।
मुद्दा फर्स्योटमा वृद्धि
उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । छिटो न्यायका लागि विभिन्न प्रयास थालेको र एक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको अदालतले जनाएको छ ।
सरकारले गंगामाया अधिकारीलाई अनशन तोडाउँदा गरेको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृहमन्त्रालयका उपसचिव वशिष्टकुमार घिमिरे र गंगामायाका तर्फबाट कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं, सुबोध प्याकुरेल, बाबुराम गिरी र रामआशिष कार्की रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी गराए ।
महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–३ अजमरपट्टिमा मंगलबार राति प्रहरी र गाँजा तस्करबीच भिडन्त भएको छ । भिडन्तमा प्रहरीले १३ राउण्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले बताए ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएसँगै एउटा नाम निकै चर्चामा आयो– दुर्गा प्रसाईं । उनी झापाको बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
सरकारले मानव अधिकार आयोगकोे सिफारिशमा मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाका ३३ पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।
साउदी अरबमा ३८ नेपाली अलपत्र परेका छन् । सम्झौता अनुसारको तलब नपाउँदा अलपत्र परेका हुन् । उनीहरु ०७४ फागुन १ मा साउदी पुगेका थिए । ९ सय रियलमात्र तलब पाएपछि एक दिन ड्यूटी इन्कार गरेका नेपालीलाई कम्पनीले सडकमा निकालिदिएको हो ।
एक सय वर्ष पुरानो बाल गोपालको मूर्ति बेच्न हिँडेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सरकारलाई नेविस‌ंघको प्रश्न- ‘भोट माग्दा वाईफाई फ्रि अहिलेचाहिँ १३ प्रतिशत कर लगाउने ?’
नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको १३ प्रतिशत कर खारेजीको माग गर्दै धर्ना दिएको छ ।
अघिल्लो अध्यादेशअनुसारको विधेयक ल्याउन कांग्रेसको आग्रह
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघिल्लो अध्यादेश (माथेमा आयोगको भावना र मर्म) अनुसार नै ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समितिसँगै विपद् व्यवस्थापन कोष र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
[अपडेट] जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो , सबैको सनाखत
सिस्ने गाउँपालिका–५, धार्पानीमा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ । सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटबाट धौलापैरा भन्ने ठाउँमा जाँदै गरेको लु १ ज २५७३ नम्बरको जिप बुधबार दिउँसो करिब २ बजे धार्पानीमा दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै ४ जना र उपचारको क्रममा ३ जनाको मृत्यु भएको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार देशभरको सरकारी तथा निजी अस्पतालका साथै नर्सिङ होम र क्लिनिकहरुका आकस्मिकबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिरोको कारण नलगाड नगरपालिका ८, कायखेतका १० घर परिवार विस्थापित भएका छन् । गत असार २७ गतेयता लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले उक्त गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका हुन् ।
शहिद लखन गाउँपालिका–६ घैरुङस्थित अधेँरीमा पहिरोले घर पुर्दा आठ महिने बालकसहित तिनजनाको ज्यान गएको छ ।
प्रज्ञाको प्रेस निजी कम्पनीलाई भाडामा
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्ना प्रकाशन छाप्न किनेको अत्याधुनिक प्रेस आफूले सञ्चालनमै नल्याई निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । प्रतिष्ठानले पुरानो श्यामश्वेत प्रेस बारम्बार बिग्रिइरहने, कमजोर क्षमताको भएको र नियमित प्रकाशन छाप्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ११ करोड रुपैयाँ मागेको थियो ।
अपडेट: पर्वतको पहिरोमा एकको मृत्यु, ६ घाईते, २५ घर पुरिए
जलजला गाउँपालिका ८ बरेनेटामा गएराती पहिरोमा पुरिएर एक किशोरको मृत्यु भएको छ । राती करिब १ बजे घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएर १६ वर्षीय विकास परियारको ज्यान गएको हो । छन् ।
पहिरोले बुर्तिवाङ बजारमा दर्जन घर पुरिए
मंगलबार दिउँसोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिवाङ बजारमा पहिरो गएको छ । बजारदेखि माथिल्लो भागबाट खसेका पहिरो र बाढीले बजारका धेरै छाप्रा पुरिएका छन् । दर्जन पक्की घरमा समेत क्षति पुगेको छ ।
फेरि डुब्यो गोबरगाढा
पछिल्लो ६ दिनदेखि हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१३, गोबरगाढामा कोसी नदी पसेको छ । त्यहाँ ४० परिवारका २ सय ५० जना त्रासमा बाँचिरहेका छन् । नदी पार गर्न सक्नेहरू सुरक्षित स्थानतिर लागिसकेका छन् ।
कांग्रेसले प्रदेश समिति बनाउन सकेन
मुलुक संघीय संरचनामा गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कांग्रेसले प्रदेश समिति बनाउन सकेको छैन । पार्टीभित्रका गुटहरूको टकरावका कारण नेतृत्वले विधानबमोजिम समिति बनाउन नसकेको हो । विधानको दफा १२ मा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रदेश अधिवेशन हुने’ व्यवस्था छ ।
नेपालीमै बोल्दा नहुने ?
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा केहीअघि गरेको अंग्रेजी भाषणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा उल्लीबिल्ली भयो । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने औपचारिक समारोहमा नेपालीमै सम्बोधन गर्न भाषा आयोगले एक वर्षअघि दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए यो स्थिति नै आउने थिएन ।
हटेनन् अस्थायी कर्मचारी
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अस्थायी कर्मचारी घटाउने नीतिअनुसार सरकारले उनीहरूलाई साउन १ देखि कार्यालय नआउन भनेको थियो । तर जब हाजिर गर्न नपाएका हजारौं कर्मचारी बहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए, सरकारको निर्णय एक दिन पनि कार्यान्वयन हुन पाएन ।
नेकपामा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न निर्वाचित हुनैपर्ने
नेकपाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न निर्वाचित हुनैपर्ने व्यवस्थासहितको विधान तयार गरेको छ ।अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसहित पदाधिकारीदेखि सबै तहका नेताहरू निर्वाचनमा भाग लिन तल्लो कमिटीबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
अनुसन्धानको बजेट आफैं जुटाउन निर्देशन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूअन्तर्गतका चार अनुसन्धान केन्द्रलाई आफैं बजेट जुटाउन निर्देशन दिएको छ । त्रिविमातहत नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) छन् ।